အပြာဇာတ်ကားတွေရဲ. အံ့သြဖွယ်ရာ၂၅ ချက်ကို သင်သိပြီးပြီလား - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / အပြာဇာတ်ကားတွေရဲ. အံ့သြဖွယ်ရာ၂၅ ချက်ကို သင်သိပြီးပြီလား
အပြာဇာတ်ကားတွေရဲ. အံ့သြဖွယ်ရာ၂၅ ချက်ကို သင်သိပြီးပြီလား
Apann Pyay 8:06 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
များစွာသောလူတွေဟာ အပြာဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကို လူကြားထဲမှာပြောဖို့ သိပ်စိတ်မပါလှပါဘူး ၊ ပြောလေ့ပြောထလည်း မရှိကြပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း လူအတော်များများဟာ ဒီလောကအကြောင်း စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီထဲကမှ သင်မသိသေးတဲ့ အပြာဇာတ်ကားတွေရဲ. အံအားသင့်ဖွယ် အချက် ၂၅ ချက် အကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
၁ – အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ အပြာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရှုရခြင်းကို စွဲလန်းနေမိပြီလို့ ဝန်ခံပါတယ် ။
၂ – အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း အပြာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရှုကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေကြည့်ရှုတာထက် အများကြီးနည်းပါတယ် ။
၃ . များစွာသော ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝထဲက လိင်မှုကိစ္စတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ အပြာဇာတ်ကားတွေကို စူးစမ်းကြည့်ရှုကြတာလို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ် ။
၄- ယူကေ နိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ပေါ်က အပြာဝက်ဆိုဒ်တွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုဟာ ဆိုရှယ်နက်ဝက်ဆိုဒ်တွေ ၊ ရှောပင်းဆိုဒ် ၊ ဂိမ်း နဲ့ ခရီသွား ဝက်ဆိုဒ်တွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းထက် အများကြီး ပိုပါတယ် ။
၅ – A-Cup အရွယ်အစား ရှိတဲ့ သို့တည်းမဟုတ် ထို့ထက်သေးငယ်သော ရင်သား ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သရုပ်ဆောင်တဲ့ အပြာဇာတ်ကားတွေကို ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ Australia နိုင်ငံမှာ ကောလဟလတွေ ရှိတယ် ။
၆ – အပြာဇာတ်ကား ကြည့်ရှုတဲ့အမျိုးသားတွေဟာ ဇာတ်ကားထဲက အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ရဲ. အခြားသော ကိုယ်အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေထက် မျက်နှာကို ပိုပြီးကြည့်တက်ကြတယ် ။
၇ – ၈၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းသော မုဒိန်းကျင့်ခန်းတွေပါတဲ့ အပြာကားတွေဟာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသားတွေရဲ. မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေကနေ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်တယ် ။
၈ – အင်တာနက်ကနေ အပြာဇာတ်ကား ၊ စာအုပ်စသဖြင့်ကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲမှု အများဆုံးအချိန်ဟာ (9am – 5pm) ကြားမှာ ဖြစ်တယ်။
၉ – အမေရိကန်က အမျိုးသား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အလုပ်ခွင်ကနေ အပြာဇာတ်ကား သို့တည်းမဟုတ် စာအုပ်တွေ အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ် ။
၁၀ – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ၃၉ မိနစ်မှာ အပြာဇာတ်ကားသစ်တစ်ကား ဖန်တီးပြုလုပ်နေတယ် ။
၁၁ – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ အပြာဇာတ်ကား အခွေတွေ ထုတ်လုပ်မှု နဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တွေ ဖန်တီးမှု အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကတော့ ဂျာမဏီပါ ။
၁၂ – အမျိုးသား အများစုဟာ အပြာကားတွေ ကြည့်ခဲ့ကြတယ် ။
၁၃ – အပြာဇာတ်ကား ရိုက်ကူးတဲ့ အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်တွေဟာ ဝင်ငွေနည်းကြပါတယ် ။ သူတို့ဟာ gay ဇာတ်ကားတွေမှာတော့ သာမန်ထက် ဝင်ငွေပိုရကြပါတယ် ။
၁၄ – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အပြာဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေမှုဟာ နေ့စဉ် 68 million ထိ ရှိတယ် ။ ဒါဟာ အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေမှုရဲ. ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
၁၅ – သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ အပြာကားကြည့်ရှုမှုနှုန်းတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတယ်
၁၆ – Montreal တက္ကသိုလ်ရဲ. လေ့လာမှုတွေအရ များစွာသော အမျိုးသားတွေဟာ အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်မှာ အပြာကားကို စကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၇ – အင်တာနက်မှာ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေရဲ. တစ်ဝက်လောက်ဟာ အပြာရုပ်ရှင် ၊ စာပေ နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါပဲ ။
၁၈ – မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အပြာကားကြည့်ရှုမှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကတော့ သေဒဏ်ပါ ။
၁၉ – Utah ပြည်နယ်ဟာ အမေရိကန်မှာ အပြာဇာတ်ကားထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးပြည်နယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
၂၀ – တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး စကားရပ်ကတော့ teen ဖြစ်ပါတယ် ။ Google Search Engine ရဲ. မှတ်တမ်းတွေအရ ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ရှာဖွေမှု သုံးကြိမ်ပြုလုပ်တိုင်း “Teen Porn” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ရှာဖွေမှုဟာ တစ်ကြိမ်ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း “Teen Porn” ဆိုတဲ့ အပြာဇာတ်ကား အမျိုးအစားဟာ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ မြင့်တက်လာနေပါတယ် ။
၂၁ – အမေရိကမှာ လူတွေဟာ အပြာဇာတ်ကားတွေကို အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ရှာဖွေဖို့ အများဆုံး သုံးတဲ့စကားလုံးက Creampie ဖြစ်တယ်လို့ Pornhub ရဲ. လေ့လာမှုတွေကနေ သိရပါတယ် ။ Teen ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့လည်း ရှာဖွေမှု များပြားပါတယ် ။
၂၂ – တစ်နေကုန်စက္ကန့်မလပ် အပြာကားကြည့်ရှုနေသူပေါင်း 30,000,000 ထက်ပိုပြီး ရှိနေပါတယ် ၊ ဆိုလိုတာက စက္ကန့်တိုင်းမှာ ကြည့်ရှုနေသူပေါင်း 30,000,000 ထက်ပိုပါတယ် ။
၂၃ – ဒီ အပြာဇာတ်ကားထုတ်လုပ်မှုက ဝင်ငွေအကျိုးအမြတ်ဟာ ဘောလုံးလိဂ်တွေ ဘက်စကတ်ဘော အသင်းတွေ အစရှိတဲ့ အားကစားအသင်းတွေရဲ. ၀င်ငွေထက် ပိုပြီးများပါတယ် ။
၂၄ – နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အပြာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၁၃၀၀၀ ခန့်ထွက်ရှိနေပြီး အဲ့ဒီကနေ $13 billion လောက် အကျိုးအမြတ်ရနေပါတယ် ။ ဟောလိဝုဒ်ဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၅၀၇ ခန့်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ဒေါ်လာ 8.8 billion နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အပြာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဈေးကွက်ဟာ ပိုကြီးတာကို သိသာပါလိမ့်မယ်
၂၅ – လမ်းပေါ်က ပြည်တန်ဆာတွေ ၊ ကလပ်တစ်ချို.နဲ့ အပြာစာအုပ် ၊ အပြာရုပ်ရှင်စသည်ဖြင့် ပါဝင်တဲ့ လိင်အလုပ်သမား ဈေးကွက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးနဲ့ အကျိုးအမြတ်အရဆုံးဈေးကွက်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Ref : list25
မြားစှာသောလူတှဟော အပွာဇာတျကားတှအေကွောငျးကို လူကွားထဲမှာပွောဖို့ သိပျစိတျမပါလှပါဘူး ၊ ပွောလပွေ့ောထလညျး မရှိကွပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့လညျး လူအတျောမြားမြားဟာ ဒီလောကအကွောငျး စိတျဝငျစားမှု ရှိကွပါတယျ ။ အဲ့ဒီထဲကမှ သငျမသိသေးတဲ့ အပွာဇာတျကားတှရေဲ. အံအားသငျ့ဖှယျ အခကျြ ၂၅ ခကျြ အကွောငျးကို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
၁ – အရှယျရောကျပွီးသူ ဆယျရာခိုငျနှုနျးခနျ့ဟာ အငျတာနကျပျေါကနေ အပွာဇာတျကားတှေ ကွညျ့ရှုရခွငျးကို စှဲလနျးနမေိပွီလို့ ဝနျခံပါတယျ ။
၂ – အမြိုးသမီးတှဟောလညျး အပွာဇာတျကားတှေ ကွညျ့ရှုကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အမြိုးသားတှကွေညျ့ရှုတာထကျ အမြားကွီးနညျးပါတယျ ။
၃ . မြားစှာသော ဆယျကြျောသကျလူငယျတှဟော နစေ့ဉျဘဝထဲက လိငျမှုကိစ်စတှကေို သိရှိနိုငျဖို့ အပွာဇာတျကားတှကေို စူးစမျးကွညျ့ရှုကွတာလို့ လလေ့ာမှုတှကေ ဆိုပါတယျ ။
၄- ယူကေ နိုငျငံမှာ အငျတာနကျပျေါက အပွာဝကျဆိုဒျတှကေို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုမှုဟာ ဆိုရှယျနကျဝကျဆိုဒျတှေ ၊ ရှောပငျးဆိုဒျ ၊ ဂိမျး နဲ့ ခရီသှား ဝကျဆိုဒျတှကေို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုမှုနှုနျးထကျ အမြားကွီး ပိုပါတယျ ။
၅ – A-Cup အရှယျအစား ရှိတဲ့ သို့တညျးမဟုတျ ထို့ထကျသေးငယျသော ရငျသား ရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ သရုပျဆောငျတဲ့ အပွာဇာတျကားတှကေို ပိတျပငျထားတယျလို့ Australia နိုငျငံမှာ ကောလဟလတှေ ရှိတယျ ။
၆ – အပွာဇာတျကား ကွညျ့ရှုတဲ့အမြိုးသားတှဟော ဇာတျကားထဲက အမြိုးသမီးသရုပျဆောငျရဲ. အခွားသော ကိုယျအဂါင်ျအစိတျအပိုငျးတှထေကျ မကျြနှာကို ပိုပွီးကွညျ့တကျကွတယျ ။
၇ – ၈၈.၂ ရာခိုငျနှုနျးသော မုဒိနျးကငျြ့ခနျးတှပေါတဲ့ အပွာကားတှဟော ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးသော အမြိုးသားတှရေဲ. မကောငျးတဲ့ အမူအကငျြ့တှကေနေ ဖနျတီးထားတာ ဖွဈတယျ ။
၈ – အငျတာနကျကနေ အပွာဇာတျကား ၊ စာအုပျစသဖွငျ့ကို ဝငျရောကျသုံးစှဲမှု အမြားဆုံးအခြိနျဟာ (9am – 5pm) ကွားမှာ ဖွဈတယျ။
၉ – အမရေိကနျက အမြိုးသား ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျဟာ အလုပျခှငျကနေ အပွာဇာတျကား သို့တညျးမဟုတျ စာအုပျတှေ အသုံးပွုခဲ့တယျလို့ ဝနျခံထားပါတယျ ။
၁၀ – အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ၃၉ မိနဈမှာ အပွာဇာတျကားသဈတဈကား ဖနျတီးပွုလုပျနတေယျ ။
၁၁ – အမရေိကနျပွညျထောငျစုဟာ အပွာဇာတျကား အခှတှေေ ထုတျလုပျမှု နဲ့ ဝကျဆိုဒျတှေ ဖနျတီးမှု အမြားဆုံးနိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယကတော့ ဂြာမဏီပါ ။
၁၂ – အမြိုးသား အမြားစုဟာ အပွာကားတှေ ကွညျ့ခဲ့ကွတယျ ။
၁၃ – အပွာဇာတျကား ရိုကျကူးတဲ့ အမြိုးသားသရုပျဆောငျတှဟော ဝငျငှနေညျးကွပါတယျ ။ သူတို့ဟာ gay ဇာတျကားတှမှောတော့ သာမနျထကျ ဝငျငှပေိုရကွပါတယျ ။
၁၄ – အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ အပွာဇာတျကားနဲ့ ပတျသကျတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို အငျတာနကျမှာ ရှာဖှမှေုဟာ နစေ့ဉျ 68 million ထိ ရှိတယျ ။ ဒါဟာ အငျတာနကျမှာ ရှာဖှမှေုရဲ. ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးလညျး ဖွဈပါတယျ ။
၁၅ – သမ်မတရှေးကောကျပှဲတှဟော အပွာကားကွညျ့ရှုမှုနှုနျးတှအေပျေါ သကျရောကျမှုရှိတယျ
၁၆ – Montreal တက်ကသိုလျရဲ. လလေ့ာမှုတှအေရ မြားစှာသော အမြိုးသားတှဟော အသကျဆယျနှဈအရှယျမှာ အပွာကားကို စကွညျ့ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၁၇ – အငျတာနကျမှာ ရှိတဲ့ အကွောငျးအရာတှရေဲ. တဈဝကျလောကျဟာ အပွာရုပျရှငျ ၊ စာပေ နဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ အကွောငျးအရာတှပေါပဲ ။
၁၈ – မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အပွာကားကွညျ့ရှုမှုအတှကျ ပွဈဒဏျကတော့ သဒေဏျပါ ။
၁၉ – Utah ပွညျနယျဟာ အမရေိကနျမှာ အပွာဇာတျကားထုတျလုပျမှု အမြားဆုံးပွညျနယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
၂၀ – တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ရှာဖှမှေုအမြားဆုံး စကားရပျကတော့ teen ဖွဈပါတယျ ။ Google Search Engine ရဲ. မှတျတမျးတှအေရ ၂၀ဝ၅ ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှဈအတှငျး ရှာဖှမှေု သုံးကွိမျပွုလုပျတိုငျး “Teen Porn” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ရှာဖှမှေုဟာ တဈကွိမျပါဝငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့လညျး “Teen Porn” ဆိုတဲ့ အပွာဇာတျကား အမြိုးအစားဟာ ထုတျလုပျမှုပမာဏ မွငျ့တကျလာနပေါတယျ ။
၂၁ – အမရေိကမှာ လူတှဟော အပွာဇာတျကားတှကေို အငျတာနကျပျေါကနေ ရှာဖှဖေို့ အမြားဆုံး သုံးတဲ့စကားလုံးက Creampie ဖွဈတယျလို့ Pornhub ရဲ. လလေ့ာမှုတှကေနေ သိရပါတယျ ။ Teen ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့လညျး ရှာဖှမှေု မြားပွားပါတယျ ။
၂၂ – တဈနကေုနျစက်ကနျ့မလပျ အပွာကားကွညျ့ရှုနသေူပေါငျး 30,000,000 ထကျပိုပွီး ရှိနပေါတယျ ၊ ဆိုလိုတာက စက်ကနျ့တိုငျးမှာ ကွညျ့ရှုနသေူပေါငျး 30,000,000 ထကျပိုပါတယျ ။
၂၃ – ဒီ အပွာဇာတျကားထုတျလုပျမှုက ဝငျငှအေကြိုးအမွတျဟာ ဘောလုံးလိဂျတှေ ဘကျစကတျဘော အသငျးတှေ အစရှိတဲ့ အားကစားအသငျးတှရေဲ. ဝငျငှထေကျ ပိုပွီးမြားပါတယျ ။
၂၄ – နှဈစဉျနှဈတိုငျး အပွာရုပျရှငျဇာတျကားပေါငျး ၁၃၀ဝ၀ ခနျ့ထှကျရှိနပွေီး အဲ့ဒီကနေ $13 billion လောကျ အကြိုးအမွတျရနပေါတယျ ။ ဟောလိဝုဒျဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားပေါငျး ၅၀၇ ခနျ့သာ ထုတျလုပျနိုငျပွီး ဒျေါလာ 8.8 billion နဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ အပွာရုပျရှငျဇာတျကားဈေးကှကျဟာ ပိုကွီးတာကို သိသာပါလိမျ့မယျ
၂၅ – လမျးပျေါက ပွညျတနျဆာတှေ ၊ ကလပျတဈခြို.နဲ့ အပွာစာအုပျ ၊ အပွာရုပျရှငျစသညျဖွငျ့ ပါဝငျတဲ့ လိငျအလုပျသမား ဈေးကှကျဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွီးဆုံးနဲ့ အကြိုးအမွတျအရဆုံးဈေးကှကျကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ ။